Novambra: manomboka androany ny « Iray volan’ny sary » | NewsMada
Novambra: manomboka androany ny « Iray volan’ny sary »
Toy ny isan-taona, natokana ho an’ny saripika ny volana novambra. Tontosaina amin’io fotoana io koa ny “Festival Sar’nao”. Ho an’ny amin’ity 2018 ity, manomboka androany, 13 novambra, io hetsika lehibe indrindra, miompana tanteraka amin’ny sary, io. Andiany fahasivy ny amin’ity taona ity.
Araka ny efa mahazatra, misy hatrany ny lohahevitra asongadina amin’ireo fampirantiana sy fanentanana ary hetsika samihafa, mandritra ny “Sar’nao”. Ny amin’ity indray mitoraka ity, homen-danja ny kolontsaina sy ny nentim-paharazana. Sehatra iray hampahafantarana ireo tanora misandratra, eo amin’ny tontolon’ny fakana sary, ity “festival” ity. Ankoatra ny fampirantiana ny asa efa vitan’izy ireo, hisy ny fihaonan’ireo sokajin-taona samihafa, samy milomano ao amin’ity sehatra ity.
Anisan’ny hampiavaka ny andiany fahasivy amin’ny “Festival Sar’nao” ny fampiantranoany ny “Regards croisés”, fifaninanana anehoana ireo talenta vaovao, avy aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Eo koa ny fifaninanana eo amin’ny samy matihanina, izay samy miezaka ny hanatsara hatrany ny fahaizany sy ny teknikany.
Marihina fa andiany fahatelo ny “Regards croisés”. Tsy hifarana kosa ny “Festival Sar’nao” raha tsy ny 24 novambra izao.